कुन ब्लडग्रुप भएका मानिसले के खाने, के नखाने ? - inaruwaonline.com
कुन ब्लडग्रुप भएका मानिसले के खाने, के नखाने ?
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फाल्गुण २८, २०७२ समय: १६:०६:०७
२८ फागुण। हामी धेरैलाई थाहै छैन की मानिसको रक्त समूहले समेत उसलाई चाहिने सन्तुलित भोजनको प्रकार निर्धारण गरेको हुन्छ ।मानिसको ब्लड ग्रुप अनुसार सन्तुलित भोजन छनोट गर्न नसक्दा मानिसमा एसिडीटी, अपच, कब्जियत तथा वजन बढ्ने लगायतका समस्या पैदा हुने गरेको कतिपय अ्रध्ययनहरुबाट प्रमाणित भैसकेको छ ।
एबी: भोजनको मामिलामा यो रक्तसमूहका मानिसहरु सबैभन्दा बढि भाग्यमानी हुन्छन् । यिनीहरुले लगभग सबै खाले खानेकुरा खान सक्छन् । किनकी यिनीहरुको पाचन प्रणाली अन्य रक्तसमूहका मानिसहरुको भन्दा बढि सक्रिय तथा सक्षम हुन्छ । तर खान मिल्यो भन्दैमा भकाभक खाइरहनु चाहीँ हुँदैन । सन्तुलित तथा ठीक्क खानेकुरा मात्र खानुपर्छ ।अनलाइनखबरबाट